Thomas Dekker Anorova Psychological Horror Goridhe na "Jack Anoenda Kumba" - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Thomas Dekker Anorova Psychological Horror Goridhe na "Jack Anoenda Kumba"
Thomas Dekker Anorova Psychological Horror Goridhe na "Jack Anoenda Kumba"
by Waylon Jordan October 12, 2016 588 maonero
Jack Anoenda Kumba zvinonzwika kunge zita remusoro wemudiwa wemamhanzi kana mutambo unonzwa wakanaka nezverwendo rwemurume kudzokera kumidzi yake kuti azviwane. Paanosvika ipapo, anowana boka revanhu vanomuda uye vanoda kusimudzira zviroto zvake uye nekumubatsira iye ave akanakisa vhezheni yake yaanogona kuve iye. Ndiyo imwe yemafirimu aya anokusiya uchinzwa uchifara uye uchizadzikiswa kana zvikwereti zvikunguruka.
Ndizvozvo NOT iyo firimu yakagadzirwa naThomas Dekker. Panzvimbo pezvo, sevamwe vese vepfungwa dzinokuvadza zvepfungwa, zita iri rekunyepedzera.
Sezvo firimu richivhura, Jack Thurlowe (Rory Culkin) ari kuita nezve rake rezuva nehupenyu hupenyu paanogamuchira foni. Vabereki vake vakapinda mutsaona yemotokari. Baba vake vakaurayiwa, asi amai vake (vaitamba naLin Shaye asingaenzaniswi), kunyangwe paine mapundu nemaronda, vapona. Iye munguva pfupi ari munzira kuenda kumba kunochengeta amai vake uye kuronga gadziriro yemariro ababa vake. Ndiyo nguva apo dambudziko rake rinotanga chaizvo.
Izvo zvinotevera rwendo runononoka rwekupisa munguva yakapfuura sezvo Jack anouya akatarisana nezviitiko kubva paudiki iye kubvira kare akadzvinyirirwa. Sezvo hope dzake dzinotyisa dzinotanga kupinda muchokwadi chake, nyika yake inotenderera zvisingaite.
Culkin anopa mashandiro akajeka saJack, mbishi uye anotambura sezvo psyche yake yakafukurwa. Chimwe chizaruro chinouya chinomushandura uye mutambi anonyoresa shanduko mumuviri wake wese. Handina chokwadi chekuti ndakamboona Culkin achipa zvirinani kuita. Chandinonyatsoziva mushure mekuona iyi firimu ndechekuti isu tinogona kutarisira kuti ave kutora chinzvimbo chekutungamira kazhinji mune ramangwana. Haasi iye chete ane tarenda rinoshamisa, asi iye anehwo hunhu hwekugona kukwezva vateereri vake kuti vatevere mafambiro ake ese pachiratidziri.
Uyezve, pane Lin Shaye. Shaye ndiye Meryl Streep wepasi rinotyisa uye anozviratidza, zvekare, kuti isimba rekuverengwa pamwe nebasa raTeresa, amai vaJack. Imwe nguva iye anonetsekana uye ane rudo amai uye anotevera iye anofasha pamusoro nehasha nemhirizhonga. Maitire aanozviita nekutendeka uye nekuita senge kusununguka akadaro asinganzwisisike semukadzi waanotamba.
Dekker anotenderedza vatambi neakawanda evatambi vane tarenda uye maaiti. Daveigh Chase (aka Samara mukati The Ring) inopenya munzvimbo yeshamwari yepamusoro yaJack, uye vaLouis Hunter vanopfungaidza saJack's sekinesi yekunext door muvakidzani angave kana angave asina zvinangwa zvakaipa. Tarisa padyo uye iwe uchaonawo Nikki Reed kubva ku rukungurima franchise uye yake yazvino stint saBetsy Ross paFox's Kurara Hollow.
Asi iyo yese tarenda yaizoenda pasina kana basa rinoshamisa kuseri kwezviitiko. Dekker script uye nhungamiro inoita kuti vateereri vafungidzire, vasingambopa hwaro hwakasimba hwekumira. Iye nounyanzvi anotifambisa kubva kuchokwadi kuenda mukunyengera uye kudzoka zvakare sezvidimbu pane chessboard. Izvo zvinotyisa mufirimu ndezvechokwadi, uye zvakaipisisa pane zvese, hazvinzvenge.
Yakabatana neCeiri Torjussen's haunting score uye Austin F. Schmidt's stylish cinematography, iyi ndeimwe firimu yausingade kupotsa.
Jack Anoenda Kumba inoburitswa mumabhaisikopo uye paVOD Gumiguru 14, 2016 kubva Momentum Mifananidzo. Tarisa uone yako yemunharaunda zvinyorwa uye ona iyi firimu ASAP! Iyi bhaisikopo ndeimwe yemhepo roller coaster iyo inokodzera kutasva.